အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..။ ပို့စ်တွေမတင်နိုင်တာ ကြာလာတော့.. လာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို အားနာလာမိတာကြောင့် (ဆားချက်သည့်အနေဖြင့်) ဒါလေးကိုပဲ ပို့စ်အဖြစ် တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အားကစားပွဲတွေကို မိမိရဲ့ PC ကနေပြီး တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့နဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက် အားကစားပွဲတွေကို ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြသမယ့်အချိန်ကိုတော့ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အချိန်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် GMT +.../ _... ကိုတော့ ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပွဲစဉ်အားလုံးကိုတော့ ပြသမယ့် အချိန်ရဲ့ နာရီဝက်(မိနစ် ၃၀)အလိုကျမှပဲ ကြည့်လိုရပါတယ်။။ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေ အပါအ၀င် အခြားအားကစားပွဲတွေကို ဘယ်နေရာက ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကို မသိသေးသူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။ အားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ...
FirstRowSports & YourSiteName
Website Clock : 23:45:54 GMT -12:00 GMT -11:00 GMT -10:00 GMT -09:00 GMT -08:00 GMT -07:00 GMT -06:00 GMT -05:00 GMT -04:00 GMT -03:30 GMT -03:00 GMT -02:00 GMT -01:00 GMT 00:00 GMT +01:00 GMT +02:00 GMT +03:00 GMT +03:30 GMT +04:00 GMT +04:30 GMT +05:00 GMT +05:30 GMT +05:45 GMT +06:00 GMT +06:30 GMT +07:00 GMT +08:00 GMT +09:00 GMT +09:30 GMT +10:00 GMT +11:00 GMT +12:00 GMT +13:00
In this section you can see Live and Free. Click on the match to view links.
ESPNESPN 2ESPN ESPN UK
00:00 UK Sports TV
00:00 Fox Soccer
21:30 Shrewsbury Town vs Walsall
22:00 Sabadell vs Hercules Alicante
22:05 Cowdenbeath vs Partick Thistle - Semi Final
23:00 Banyas vs SL Benfica
23:00 Erciyesspor vs Goztepe
23:15 Das Jahrhundertspiel : Germany vs Italy, All Star Game
23:30 Debrecen vs Ujpest
00:00 Algeria vs Libya
00:00 Girona FC vs Recreativo Huelva
00:00 Pumas UNAM vs Pachuca
01:30 UD Almeria vs Cordoba CF
01:45 Reggina vs AS Livorno
02:00 Sao Paulo FC vs Figueirense FC
02:00 Nautico Recife vs Palmeiras Sao Paulo
02:00 Coritiba FC vs EC Bahia
02:00 Atletico Mineiro vs Sport Recife
02:00 Santos FC vs Vasco da Gama RJ
02:00 Danubio FC vs El Tanque Sisley
03:15 Independiente Medellin vs Millonarios
04:00 Puebla vs Club America Mexico
04:10 Defensor Sporting vs Racing Club de Montevideo
04:30 Gremio Porto Alegre vs Botafogo
04:30 Fluminense FC RJ vs Ponte Preta
05:00 Chivas Guadalajara vs Jaguares
05:30 Patriotas vs Real Cartagena
05:30 Independiente Santa Fe vs Once Caldas